Izindaba - Amathiphu Okugqoka Imaski Yobuso Yansuku zonke
Landela lezi zinyathelo ukuze ugqoke, ukhumule futhi ugqoke imaski yobuso yansuku zonke engu-3M. I-Daily Face Masks ifanele ukugqokwa kwansuku zonke ezindaweni zomphakathi, iyawasheka ngesandla futhi ingasetshenziswa kabusha ngenani elihlala isikhathi eside.Imaski yethu yobuso bendwangu engeyona eyezokwelapha inezingqimba ezimbili zendwangu kakotini, izihibe ezilungisekayo ezindlebeni nesiqeshana sekhala esiklanyelwe ukunethezeka.
Amathiphu Okufanele Uwakhumbule
Geza izandla zakho ngamanzi afudumele anensipho imizuzwana engu-20 ngaphambi kokugqoka nangemuva kokukhipha imaski yobuso yansuku zonke engu-3M ukuze ugweme ukudlulisa noma yikuphi ukungcola noma amagciwane kumaski.Sebenzisa isibulali magciwane esinotshwala okungenani obungu-60% uma ungakwazi ukugeza izandla zakho.
Qinisekisa ukuthi imaski isesimweni esihle
Thatha imaski ngezihibe zendlebe bese uyihlola ngaphambi kokuyigqoka.Uma ubona noma yiziphi izimbobo, izinyembezi noma omunye umonakalo, zilahle bese usebenzisa entsha esesimweni esihle.
Ungampintshi umugqa wekhala
Imaski yobuso yansuku zonke engu-3M inekliphu yekhala elungisekayo.Kunokuba ucindezele isiqeshana sekhala uvale, sebenzisa izandla zombili ukugoba isiqeshana sekhala ukuze ihlale kahle ekhaleni nasebusweni bakho.
Ukufakwa okugcwele kubalulekile
Imaski yakho kufanele ivale ikhala lakho nomlomo ngaso sonke isikhathi, ngisho nalapho uhambisa umlomo noma ikhanda.Imaski kufanele iphumule ngokunethezeka futhi iqine ebusweni bakho.
Uma isivuliwe, yigcine ivuliwe
Ukuvula noma ukuvala imaskhi yobuso kudala ithuba lokuthi amagciwane asabalale - ukuya nokubuya emzimbeni wakho.Ngenkathi usesidlangalaleni, ungadonseli imaski yakho phansi kusukela ebhulohweni lekhala lakho noma uyivumele ilenge endlebeni eyodwa.Amamaski asebenza kuphela njengomsebenzisi, ngakho-ke qhubeka uwagcina inqobo nje uma uphakathi kwabanye.
Hlanza imaski yakho ngokushesha nangendlela efanele
Imaski yobuso yansuku zonke kufanele igezwe ngemuva kokuyisebenzisa ukuze kuncishiswe ukusabalala kwamagciwane.Geza la maski ngesandla ngamandla ngamanzi afudumele okungenani imizuzu emi-5.Hlanza futhi wome emoyeni.Ama-multipack ethu alula asho ukuthi uzosethelwa ukuphuma okumbalwa.
Bonisa ukuthi uyakhathalela ngokugqoka imaski ezindaweni zomphakathi.
Kanye nokuqhelelana nomphakathi, ukugqoka imaskhi yobuso kuyindlela ebalulekile yokubonisa ukuthi uyayikhathalela inhlalakahle yomphakathi wakho.I-3M Daily Face Masks iyindlela enhle ongaya kuyo ngesikhathi semisebenzi yansuku zonke efana nokusebenza, ukuthenga nokuzijabulisa. Ulwazi Olubalulekile Lokuphepha:Uma unezimo zempilo ezifana nesifuba somoya, izimo zenhliziyo noma izimo zokuphefumula, kufanele uthintane nomhlinzeki wakho wezempilo (udokotela) ngaphambi kokusebenzisa.
Imikhiqizo Eshisayo - Imephu yesayithi - I-AMP Mobile I-China Protective Mask, Imaski yobuso, I-PPE Mask, Imaski yaseChina, I-FFP2 Respirator, I-Pharmacy Surgical Mask,